Igbo, Romans, Lesson 026 -- Abraham’s Faith was Accounted to him for Righteousness (Romans 4:1-8) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 026 (Abraham’s Faith was Accounted to him)
a) Guru okwukwe nke Abraham dika ezi omume (Ndi Rom 4:1-8)
NDI ROM 4:1-8
1 Gini kwa ka ayi g saykwu na Abraham nna-ayi achọtawo dika anu-aru si di? 2 N’ihi na asi na aguru Abraham n’onye ezi omume site n’ọlu, o nwere ihe inya isi, ma ọ bughi n’iru Chineke. 3 Koro nso ke N̄wed Abasi ọdọhọ? “Abraham we kwere Chineke, ewe gua nke ahu nye ya dika ezi omume.” 4 Ma nye onye n ’ọrụ, a dịghị agụ ụgwọ ọrụ ahụ dịka amara kama dịka ụgwọ. 5 Ma onye nālughi ọlu, kama ọ kwere n'Onye ahu Nke nāgu onye nāsọpughi Chineke n'onye ezi omume, aguru okwukwe-ya nye ya dika ezi omume, 6. dika Devid kwu-kwa-ra ngọzi nke nwoke ahu Chineke nyeworo n’onye ezi omume n’enweghi ọlu: 7 Ngọzi nādiri ndi A na-agbaghara mmebi iwu, na kpuchiekwa mmehie ya. 8 Onye agọziri agọzi ka nwoke ahụ bụ, nke Jehova na-agaghị agọnarị mmehie ya."
Pol chọrọ iduru ndị kwere ekwe sitere na ndị Juu na Rom gaa ezi okwukwe na ọkwa nke Agba Ọhụụ. Omuma atu, o were Abraham, nna ha, na Devid onye amuma. Site n'ime nke a, ọ gosipụtara na ha nwetara mgbaghara mmehie ha na ezi omume site n'okwukwe ha, ọ bụghị site n'ọrụ ha.
Abraham biri ndu dika nwoke ọ bula; ya onwe ya ka nma. Onye-nwe mara ọtụtụ mmehie ya na obi ya rụrụ arụ, mana ọ hụrụ na agụụ agụụ Ebreham na-eme ka ọ rube isi na mmụọ. Chineke gwara Ebreham okwu ozugbo wee kpọọ ya, Bedouin nke ochie ahụ wee kwere ọkpụkpọ ya. Ọ ghọtaghị nkwa nile nke Chineke na omimi ha na nkọwa ha niile, mana ọ tụkwasịrị Chineke obi, na okwu ya bụ eziokwu, na ọ na-ekwesi ntụkwasị obi na mmezu nke nkwa ya. Site n'okwukwe a, Abraham sọpuru Chineke ma nye aha Jehova otuto. Abraham echeghị banyere ike nke aka ya, ma ọ bụ adịghị ike ya doro anya, mana nwere ntụkwasị obi siri ike na Chineke na ikike ya enweghị nsọtụ. Ntinye obi ya na ntinye aka ya ikwesị ntụkwasị obi mejuru akpịrị ịkpọ nkụ nke obi ya.
Okwukwe siri ike a, nke pụtaranụ ma sie ike, ọ bụghị nghọta nke mmụọ ya, bụ ihe butere ezi omume ya. Abraham ezughi ezi omume n'onwe ya, ma aguru okwukwe-ya nye ya dika ezi omume. O mere mmehie dịka anyị, mana o mere ihe Chineke mere, gee ntị n'okwu ya, nara nkwa ya, ma debe ya na mkpụrụ obi agụụ.
N ’isi nke anọ, anyị gụrụ ọtụtụ oge na a gụrụ“ ụdị okwukwe ahụ nye ya dịka ezi omume ”. Okwu a ghọrọ ihe nnọchianya nke Ndozigharị. Onye, onye ji okwukwe ya nye Chineke otuto, nara ozi oma nke obe n’enweghi oke ma wulite ndu ya n’elu Kraist, bu onye ezi omume n’enweghi oru nke iwu, n’enweghi ntinye onwe onye.
Gi nụla okwu Chineke ka ekpughere gị banyere ụgha, adịghị ọcha gị, na obere ịhụnanya? Ikwenyere na ikpe ikpe ga-adakwasị gị? Nwere akwa ụta na nchegharị, ị na-arịọ mgbaghara Chineke? O buru na inupu isi site na mpako gi, Mmuo Nso ga-adọta Okpara nke Chineke kpogidere n’iru gi, we setipu aka ya n’akwa gi: “agbagharawo m gi mmehie gi. Are bụ onye ezighi ezi n’onwe gị, kama a na m eme gị onye eziomume. Dị ọcha adịghị, mana m na-edo gị nsọ kpamkpam.”
Nwee gi nụla okwu Chineke? Ọ batara n'ime omimi nke uche na obi gị, na mmụọ mmụọ gị. Nabata okwu nke Dinwenu gị; kwenye na ozioma nke nzoputa, ma jidesie obe obe ike ka Chineke were gi dika onye ezi omume n’ezie. Sọpụrụ Onye Kpọgidere n'okwukwe gị, ị ga-edokwa nsọ na mmekọrịta gị na ya.
Ọbụ abụ nke sitere n'ike mmụọ nsọ, Eze Devid, onye bụkwa onye mmehie, nwetara onwe ya ihe omimi nke izi ezi nke Chineke. O too nke ọma site n'abụ ọma ya dị ebube, o jighịkwa mmeri dị ukwuu kwenye ya n'onye ezi omume ma ọ bụ mpako nke ekpere ya ma ọ bụ onyinye mmesapụ aka ya. Kama ọ meriri nwoke ahụ na-anata mgbaghara nke mmehie ya site n'amara nke Onyenwe ya. Ezi omume enyerela gị n’ime Kraịst bụ onyinye kachasị ukwuu Chineke nyere.
EKPERE: O Chineke di nso, anyi n’ekele gi n’ihi na I nyere anyi okwu gi nke kpuoro n’ime Okpara gi, I kwuputakwara anyi banyere amara nke n’ebu mmadu. Meghee nti anyi ka anyi we nu nkwa gi, ghota ha ma kwere na gi. Ekele dịrị gị n’ihi na ị gụrụ n’onye ezi omume gị na ndị niile tụkwasịrị gị obi n’ebe niile. Nyere ndi enyi anyi aka inabata oku a ka ha wee nweta ike nke obe nke Nwa Gi.
Gini mere Abraham na Devid ji zie ezie?
Page last modified on January 26, 2021, at 06:52 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)